Vatambi veBaseball Bio
Cricket Vatambi Bio
Mhosva Figures Bio
Vatori venhau Bio
Yakasanganiswa Martial Artists Bio
MotoGP Vatasvi Bio
NASCAR Vatyairi Bio
Vezvematongerwo enyika Bio
Vatungamiri Vezvitendero Bio
Rugby Vatambi Bio
Vatambi veTennis Bio
zvoseVatambi veBaseball BioMabhiriyoni BioBoxers BioComedians BioCricket Vatambi BioMhosva Figures BioVanachiremba BioFormula One Drivers BioGolfers BioInternet Celebrities BioVatori venhau BioMedia Personalities BioYakasanganiswa Martial Artists BioMotoGP Vatasvi BioNASCAR Vatyairi BioVezvematongerwo enyika BioPublic Figures BioVatungamiri Vezvitendero BioRugby Vatambi BioVatambi veTennis Bio
Francesco Bagnaia Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Fabio Quartararo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Carlos Alcaraz Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha More Media Personalities Bio Kim Kardashian Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Yedu Kim Kardashian Biography inokuudza Chokwadi pamusoro penyaya yehuhucheche hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Murume, Vana, Mararamiro, Net kukosha, uye Hupenyu hwega.
Muchidimbu, iyi inyaya yerwendo rwehupenyu hweAmerican socialite, kubva pamazuva ake eusikana, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Ehe, iwe unogona kunge wakambojaira kumubvunzo; Kim Kardashian na Kanye West vakaparadzaniswa? Nekudaro, iwe unogona kuziva zvishoma nezve yake nyaya yehupenyu iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kim Kardashian Zvekurera Nyaya:
Kune Biography kutanga, Kim Kardashian West akazvarwa pazuva rechi21 Gumiguru 1980, kuBeverly Hills, kuCalifornia, USA.
Akazvarwa kuna amai vake, Kris Jenner, uye baba vaLate, Robert Kardashian. Kim aiva wechipiri pavana vana vakazvarwa nevabereki vake.
Hunhu hweAmerican media hwakakurira pasi pekupenya uye runako rweBeverly Hills, ichiona kumusoro-kwepedyo kwemafaro eHollywood nemisungo.
Kendall Jenner Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Kunyanya zvakadaro, ainakidzwa nekambani yehanzvadzi yake mukuru Kourtney, pamwe nevakoma vake vadiki, Khloé naRobert.
Uyu ndiKim Kardashian, mumakore ake ehuduku.
Zvingave zvinonakidza kucherechedza kuti hudiki hwaKim hwaive mamaira emamirioni kubva pane chero chinhu chiri padhuze nekugwinya.
Sezvineiwo, Svondo chechi yaive chikamu chenguva dzose yehupenyu hwemhuri. Saizvozvowo yaive tarisiro yekuti kurarama kubva pamhuri dime kwaisazove sarudzo kana vechidiki maKardashians vasvika zera.
Kylie Jenner Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Kim Kardashian Hupenyu hwemhuri:
Waizviziva here?... Kim ane hanzvadzi yakura, Kourtney, munun'una, Khloé, uye munun'una, Rob (uyo akamboroorana. Blac Chyna) Amai vavo ndevechiDutch, chiRungu, chiIrish, uye chiScotland, nepo baba vavo vaive chizvarwa chechitatu chekuArmenian America.
Mushure mekunge vabereki vaKim varambana muna 1991, amai vake vakaroora zvakare gore iroro, kuna Caitlyn Jenner, uyo akahwina decathlon weSummer Olympics muna 1976.
Khloe Kardashian Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Kuburikidza newanano yavo, Kardashian akagamuchira nhanho-vanun'una Burton "Burt", Brandon, uye Brody; hanzvadzi-hanzvadzi Casey; uye hanzvadzi-hanzvadzi Kendall naKylie Jenner.
About Kim Kardashian Baba:
Kutanga kubva, anonoka. Baba vaKim, Late Robert Kardashian aive muvambi wemu Movie Tunes, Inc., mimhanzi nekambani yekushambadzira. Aivewo gweta rakakurumbira asati afa.
Robert Kardashian akafa nekenza yegurokuro muna Gumiguru 2003. Parufu rwaRobert, kambani yaaive nayo yakapihwa nhaka naKim nevanin'ina vake vakazvitengesa.
Julia Rose Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
About Kim Kardashian Amai:
Amai vaKim, Kris ishamwari yemagariro uye aimbova muridzi wechitoro chevana. Iye zvino anotarisira basa remwanasikana wake uye ari zvakare kuita mune bhizinesi manejimendi madhiri nevamwe vese vamwe vake vane mukurumbira vana.
VaKim amai vaKris vakaroorwa negweta Robert kusvika 1991.
Mwedzi mumwe mushure mekunge amai vaKim varambana naRobert, akakurumidza kusunga banga nemumhanyi weOlimpiki- Caitlyn Jenner.
Oprah Winfrey Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Kim Kardashian Bio - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Kusiyana nevazhinji vane mukurumbira, Kim akasimuka kuita mukurumbira munzira isingabvumirwi nevhidhiyo ine mukurumbira s ** yaakaita nemuimbi weR & B Ray J.
Mukutanga kwa2007, vhidhiyo yaKim uye rapper ari pamubhedha akawira mumaoko eVivid Varaidzo, hombe ad ** t firimu kambani.
Vivid, uyo akabhadhara $ 1 miriyoni yekodzero yetepi yemaminetsi makumi matatu, akasimudzira zvakanyanya kuburitswa kwevhidhiyo, inonzi Kim Kardashian Superstar.
Kugadzirisa, Kim akakwidza nzira yepamutemo kuburikidza nekuzvipira. Zvisinei, akabvuma mari ye $ 5 mamiriyoni muna May 2007, mwedzi mitatu mushure mekubudiswa kwevhidhiyo.
Kim Kardashian Bio - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Mushure mekuburitswa kweiyo yakashata vhidhiyo, Kim akatanga kupinda munzira yake kuterevhizheni yechimwe chinhu chakasiyana zvachose.
Hazvina kutora nguva nyika isati yaona nyowani nyowani yeTV yakanzi Kuchengeta pamwe neKardashians iyo yakatanga pane yakakurumbira E! TV Network.
Yakabudiswa neAmerican Idol mutariri weRichard Seacrest, muwonero unotevera hupenyu hwe Kim; vanin'ina vake, Kourtney naKhloé; munin'ina Robert Jr.; amai Kris Jenner; baba vokurera baba Bruce Jenner (iye zvino anonzi Caitlyn); kusanganisira madzimai maviri aKris naBruce; Kendall naKylie.
Mune chimwe chiitiko chisingakanganwike kubva mumwaka wekutanga weKuchengeta vaKardashians, Kim akakurukura nemhuri yake chikumbiro chekuonekwa kushama mumagazini.
Kardashian akazobvuma kuzviita uye akazvirova zvese kuti zvitsikiswe mumagazini yaZvita 2007.
Sarudzo yake yekuonekwa mumagazini inomiririra kuti Kardashian asvika kure zvakadii maererano nekuvimba nemuviri wake.
Chikamu chikuru cherudzi rwake macurves ake, chimwe chinhu chaaive asingagari achinakigwa nacho uye pane imwe nguva aitya nekukura kuri kuwedzera.
"Ndaiwanzotaura minamato yangu ndisati ndarara, uye ndichinamata kuti ndirege kukura,".
Kim Kardashian Upenyu Hupenyu:
Seyechokwadi nyeredzi terevhizheni, hupenyu hwerudo hwaKim hwave iri nyaya yekufarira zvakanyanya midhiya. Aingova nemakore makumi maviri chete paakaroora mugadziri wemimhanzi Damon Thomas mu20.
Muchato wakapera mushure memakore mana. Kutevera kurambana kwake, Kim aive netambo yevakomana vepamusoro-soro, kusanganisira muimbi Nick Lachey neNew Orleans Saints vachidzoka kumashure, Reggie Bush.
Muna 2010, Kardashian aive nechamupupuri kufambidzana nepro basketball mutambi Kris Humphries. Vaviri vakaroora mune yakasarudzika, terevhizheni mhemberero Nyamavhuvhu anotevera pamberi pevanopfuura mazana mana evashanyi.
Nekudaro, mufaro wemuchato wakagara kwenguva pfupi kuna Kardashian naHumphries sezvo akanyorera kurambana mushure memazuva makumi manomwe nemaviri chete emuchato. Humphries akatsvaga kuregererwa pachinzvimbo uye akataura kuti roora raive rekubiridzira.
MunaEpril 2013, zvakaziviswa kuti Kardashian naHumphries vagadzirisa kurambana kwavo, vachidzivirira kutongwa kwakamirirwa kwenguva refu kwakaitika muna Chivabvu 2013.
Kim Kardashian akasangana sei neKanye West - Iyo Rudo Nyaya:
Panguva yekurambana kwaKim kuchiri kuenderera mberi, akabatanidzwa nerapper ane mukurumbira Kanye West. Kanye naKim vakange vava shamwari kwemakore vasati vambotanga kufambidzana neshamwari mu2012.
Pamaive shamwari Kanye haana kumbotadza kubvuma manzwiro ake kuna Kim (akabva aroorwa naKris Humphries) waakataura murwiyo rwake "Theraflu":
"Ini ndinobvuma kuti ndakadanana naKim ... 'Round nguva imwechete yaakadanana naye ... Hazvina kunaka, babygirl, ita zvinhu zvako ... Lucky handina kuti Jay amudonhedze kubva muchikwata."
(Kanye aireva pal pal yake Jay-Z muridzi weNew Jersey Nets, timu yaimbova murume waKim Kris Humphries akatamba.
Jennifer Lawrence Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kim akarambana zviri pamutemo Kris (waakange aparadzanisa naye) mushure mekunge abata pamuviri naKan. Hazvina kutora nguva asati abereka mwanasikana wavo wekutanga, North West munaJune 2013.
Kuberekwa kweNorth West kwakatora hukama hwevabereki vake kusvika pakakwirira zvakanyanya sezvo Kanye akaronga kuna Kim pazuva rake rekuzvarwa makumi matatu nematatu musi wa33 Gumiguru 21 kuAT&T Park muSan Francisco.
Mwedzi yakati gare gare, vakasunga pfumo pa 24th yaMay 2014 kuForte Di Belvedere.
Hukama hwavo hwakawedzera kukomborerwa nevamwe vana vaviri, Saint West (akazvarwa 2015) uye Chicago West (akazvarwa kuburikidza nemimba yekubereka muna Ndira 2018).
Kim Kardashian Bhizinesi:
Kim muenzaniso, chaiye nyeredzi terevhizheni, muzvinabhizimusi, uye nesocialite. Iye zvakare ane danda mubhizinesi renyika naKimsaprincess Productions, LLC.
Muna 2006, Kim akapinda mubhizinesi nemhuri yake mushure mekunge iye nehanzvadzi dzake mbiri vavhura shopu yekutengesa, DASH (yakabva pazita remhuri rekupedzisira) muCalabasas, California.
Boutique yakawedzera bhizinesi rayo nekuvhurwa kwezvitoro muMiami, New York City, uye pop-up muSouthampton mu2014. Bhizinesi, sezvavanotaura, rizere nenjodzi.
Kim akange achinzwa nezvazvo apo DASH yakabiwa mu2017. Chiitiko ichi chakaitika apo mukadzi akabviswa nemari inosvika $ 1,600 yekutengesa kweKardashian neMuvhuro, kusanganisira zvakasiyana zvinhu zvekupfeka nezvinonhuwira.
Iye anonzi akamhanyisa mune sirivheri sedan pamwe neakapamba. Fembera chii! $ 1,600 yaingorovera kuna Kim, mukadzi uyo akabvunzwa nevakawanda kana akapfuma kupfuura Kylie jenner.
Ja Morant Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kim Kardashian Chokwadi - Akabiwa kuGun Point:
Kwangosara mavhiki mashoma kubiwa kweboutique kusati kwaitika, Kim akapambwa akanongedzwa nepfuti muna Gumiguru 2016 pafurati rake reumbozha muParis.
Mbavha dzainge dzakapfeka nhumbi dzechipurisa dzakakunda mupurisa wepafurati akavapinza mukati.
Akazosungwa maoko nemabhanditi akananga kuFlat kwaKim. Vakapinda mumba vakabata pfuti.
Kim akanga asiri mumwe wekutarisana nevarume vaiva nezvombo sezvo aisungirira chinangwa chavo chokumusunga maoko nokumuvharira muimba yokugezera.
Chikwata chakaparadzana ne £ 9 Mamiriyoni emadhora anokosha ezvishongo zvekufukidzira zvichibatanidza ne £ 3.5 mamiriyoni 20 carat diamond nechende yakapiwa naKan.
Zvakatora Kim kumwedzi kuti adzoke kubva pachiitiko chakaipa. Akadzivisawo zviitiko mumutauro mukuru weFrance nokuti izvi zvaive zvichiri zvitsva. Kunyanya zvakadaro, Kim haaizoshanyira kuParis kwenguva refu.
Kim Kardashian Hupenyu hweMunhu:
Kardashian iRibra uye ane hunhu hunotevera kuhunhu hwake;
Kim Kardashian's Simba: Mushandirapamwe, vezvematongerwo enyika, vane nyasha, vane pfungwa dzakanaka, uye nemagariro.
Utera hwaKardashian: Kusakanganisika, kunodzivisa kupikisana, kunotakura kugomera uye kuzvidzora.
Zvakaita Kim Kardashian: Kuvhiringidza, unyoro, kugovana nevamwe, uye kunze.
Kim Kardashian haafarire: Mhirizhonga, kusaruramisira, miromo ine ruzha, uye kuwirirana.
Kutenda nekuverenga nyaya yedu paKim uye kutenda mairi Zvatiri uye Zvatinoita. Vatariri vedu pa ChildhoodBiography yakatarisa kurongeka uye kurongeka uku uchimisa Kim Kardashian Biography uye Nyaya Yevacheche.
Ndokumbira kuti uise zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezvaKim.
Anne Hathaway Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Childhood Biography Diary- nekuda kwemaikadzi AMERICAN REALITY TV PERSONALITIES
Ellen DeGeneres Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Lewis Hamilton Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts